Sidee in ay sameeysa codsi mobile | khayraadka Work ka USAHello | USAHello
Sidee in ay sameeysa codsi mobile
Dadka la qorsheeyo oo waxaad ka samaysaa barnaamijyada ee casriga ah iyo qalab kale oo mobile waxaa loo yaqaan horumarinta codsiga mobile, ama horumarinta app. Ogow sida ay u noqdaan sameeysa ah app mobile.
Waa maxay sameeysa codsi mobile?
Dadka aad u hesho macluumaad iyo xidhmaan dadka kale iyada oo loo marayo qalabka ay mobile. Codsiyada jira barnaamijyo on telefoonada iyo qalabka kale. "App" waa la soo gaabiyey codsiga. horumarinta codsiga Mobile (sida caadiga ah loo yaqaan horumarinta app) abuuro iyo barnaamijyada kuwa. magaca kale ee shaqada waa sameeysa barnaamijyada software-.
Maxaad ka fili kartaa in shaqada of sameeysa codsiga mobile?
Waajibaadka sameeysa codsi mobile
horumarinta codsiga Mobile abuuro code for barnaamijyada ay maamusho codsiyada. Waxay sidoo kale kaa caawin qorshaha iyo qorshee apps cusub. Waxay tijaabiyo apps iyo xallinta masalooyinka muujinaya kor. Waxay sii jira codsiyada socday iyo iyaga u cusboonaysiiso.
Daawo hadal sameeysa app ah oo ku saabsan shaqada uu.
horumarinta codsiga Mobile shaqeeyaan laga yaabaa in shirkadaha technology waaweyn ama ganacsiga xawaaladaha yar. Qaar ka mid ah horumarinta shaqeeyaan naftooda guriga.
Mushaharka loogu talagalay horumarinta codsiga mobile
Mushaharka saacadoodba muddo sameeysa codsiga mobile ballaaran kala duwan $21 in $150 in halkii saac, ku xiran waayo-aragnimo iyo goobta. Mushaharka qaranka celceliska 2018 waxay ahayd ku dhawaad $100,000 sanadkiiba. Laakiin shaqooyin shaqsi badan oo dheeraad ah ama ka yar badan ku bixin kartaa.
Waa maxay nooca qofka ka dhigaysa a sameeysa app mobile wanaagsan? Waxaad u baahan tahay in labada farsamo iyo hal abuur leh.
Samir faahfaahinta yar iyo sixitaan joogto ah iyo sixitaanka
Good ee xalinta dhibaatada
Good at xubno kale kooxda shaqada
Wacan tahay xidhiidhinta arrimaha farsamo si ay dadka aan khubaro
Awood u leh inay ka shaqeeya dhowr mashruuc oo kala duwan waqti isku mid ah
Expert oo ku qoran luqadaha barnaamijyada, sida Java iyo Ujeeddo C
Awood u leh Xeerka, imtixaanka, Debug, oo ay ula socdaan isbedelka ee codsiyada mobile
Aqoonta shuruudaha codsiga mobile, fikradaha iyo dhaqanka fiican
Awoodaan in ay la qabsadaan codsiyada web jira, waayo, barnaamijyada moobiilllada
aqoon Expert ee interface user (UX)
Tababarka horumarinta app mobile
Waxaad u baahan doontaa shahaadada koowaad ee injineernimada software iyo horumarka codsiga mobile. Ogow sida loo codsado college
Haddii aad qabto tababarka ma at dhan in kombiyuutarada, ama haddii aadan diyaar u yihiin kuliyadaha, waxaad bilaabi kartaa koorso computer ama sireed a. kulliyado badan fasallada tababarka computer-jaban. Waxaa laga yaabaa in fasalada gaar ahaan loogu talagalay dadka cusub oo af Ingiriisiga baraneysa. Raadi college beesha kuu dhow.
Shaqeeyayaashu inta badan ma weydiisan shahaado. Waxay raadin doonta dheeraad ah oo waayo-aragnimo iyo aqoon. Laakiin qaar ka mid ah shahaadooyinka waxaa si fiican u yaqaan si loo shaqeeyaha iyo uu noqon doonaa qiimihiisu taxay on your resume.
Halkan waxa ku jira shahaadooyinka-ugu wanaagsan ee loo yaqaan. Xulo magaca si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo shahaado kasta:
Developer Android Associate
Horumarinta Kony Certification
Salesforce Certified Platform App dhise
Waxaad u baahan doontaa waayo-aragnimo ee technology computer ama tiknoolajiyadda macluumaadka ka hor inta aad bilaabi kartaa barnaamijyada dhismaha iyo codsiyada. Habka ugu fiican ee si aad u hesho waayo aragnimo waa in ay ka shaqeeyaan ganacsi technology a, ganacsi design web a, ama ganacsi in uu yeesho Dalka Chine.
Maxaa dhacaya haddii weli aan lahayn waayo-aragnimo lahayn? Xaggee ayaan bilaabi?
Waxaad ka heli kartaa shaqo heer bilow ah ee technology computer. Baro xirfadaha farsamada computer aasaasiga ah, sida koodh ama barnaamijyada. Markaas waxaad ka heli kartaa shaqo heer bilow ah oo helaan waayo-aragnimo aad u baahan tahay.
Faahfaahin intaas ka badan sida loo bilaabo xirfadaada iyo aad u hesho shaqo ee technology computer. Tusaale ahaan, Waad awoodaa:
Raadi shaqooyinka at Dice, goobta ah oo shaqo online shaqaalaha casriga ah
Raadi shaqada Upwork, ogeysiiska shaqo banaan internet ku salaysan
Jobs in technology computer
Sidee si ay u noqdaan farsamo ah macluumaadka caafimaadka
Statistics iyo xog ku saabsan horumarinta software
xirfadaha horumarka app Mobile iyo waddooyinkiisa mustaqbalkiisa ciyaareed la mid ah